Umbuzo FSX Weather
unyaka 1 11 edlule #854 by Dariussssss
Ngasizathu simbe, isici sezulu bukhoma FSX konakele kakhulu. Hhayi nje kuphela okungalungile, kepha akukho ndawo eduze namaqiniso, noma silungile kwezinye zezindiza. Njengamanje, iningi lezikhumulo zezindiza eYurophu libhekene nokubambezeleka ngenxa yokuqhuma kweqhwa elinamandla.
Ukuze uphumelele, u-EHAM Amsterdam..ngempela, isimo sezulu siyi:
I-Wind 16 kt evela eNyakatho
Ukushisa kwe-1 ° C
Ukucindezela i-972 hPa
Ukubonakala: 4000 m
Ama-scattered ama-400 ft
I-Overcast ku-700 ft
(ukukhanya) izinhlamvu zeqhwa
In FSX, ngendlela ehlukile. Sula isibhakabhaka, umoya ohlukile ufudumele .... yini esihogweni? Ingabe ikhona indlela ezungezile?
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: luc57
unyaka 1 9 edlule - unyaka 1 9 edlule #941 by DRCW
Injini yesimo sezulu ye-boxed FSX ayisekelwa yiJESPEN ekunika isimo sezulu bukhoma. Ngicabanga ukuthi kusenzelwa i-Steam Edition inqobo nje uma uDovetail enesivumelwano nabo. Insiza ayikhokhelwa ngeDovetail. Njengamanje njengamanje i-FSW ayinayo injini yesimo sezulu esisebenzayo noma kanjiniyela wesithathu ongathenga kuyo. Ukuphela kwendlela yokuthola isimo sezulu sangempela sehlabathi FSX I-Boxed edition, ukuthenga enye efana ne-Active Sky 2016
unyaka 1 8 edlule #1013 by ama-goffers
Ngithole uhlelo lwesimo sezulu samahhala - luncane futhi lujove ngesimo sezulu bukhoma FSX - FSXI-WX.
www.plane-pics.de/fsxwx / ekhaya.htm
Awudingi ukufaka. Gijimani FSXUhlelo lwe-WX uma uku FSX.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: DRCW
unyaka 1 8 edlule #1014 by Dariussssss
Isayithi ayikwazi ukufinyelelwa ..... ekuhumusheni, isixhumanisi esifile.
unyaka 1 6 edlule #1063 by ama-goffers
Sawubona Dariussssss. Angazi ukuthi usho ukuthini. Isixhumanisi kubonakala ngathi singisebenzela njengamanje.
Mhlawumbe lokhu, (lapho ukulandwa kwangempela kungatholakala) .... www.plane-pics.de/fsxwx / imiyalo-fsx.htm
unyaka 1 6 edlule #1064 by Welsheagle
Leso sixhumanisi singisebenza kimi kodwa ngingathanda ukusikisela www.fsrealwx.net/
Ngiyisebenzisa futhi ikunikeza izimo zezulu zangempela .. sonke isikhathi.
Ungasebenzisa inguqulo yamahhala noma uthuthukise ku-pro.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: ama-goffers